Babhekene nengwadla abahola eyesibonelelo - Ilanga News
Home Izindaba Babhekene nengwadla abahola eyesibonelelo
Babhekene nengwadla abahola eyesibonelelo
Kabazi bazoholaphi njengoba kulinyazwe imishini yemali
YASALA inje imishini yemali eminingi eThekwini nakwezinye izindawo ezaceke-lwa phansi ngesikhathi kunezibhelu zokutatshwa kwempahla
emuva kokuba kuvalelwe uMnu Jacob Zuma ejele.
ZIYIME emthumeni kubantu abaningi baKwaZulu-Natal njengoba bengazi ukuthi uma sekuqalwa ukuholwa kwesibonelelo sabangasebenzi esiwuR350, bazosiholaphi kwazise izitolo, amaposi – lapho le mali iholwa khona nemishini yoku-khipha imali kwacekelwa phansi ngesikhathi abantu bezitapela ezitolo emasontweni amabili adlule.
Kuzokhumbukela ukuthi ngeSonto, uMengameli Cyril Rama-phosa uthe uhulumeni usukhethe ukuyibuyisa le mali eke yamiswa ezinyangeni ezimbalwa ezedlule.
ILANGA lihambele ezindaweni ezahlukene, laxoxa nabafundi balo abake bayihola le mali, aba-nye abakhala ngokuthi njengoba zicekelwe phansi ezinye izindawo, kuzophoqa ukuba bagibele baye ezindaweni ezikude nabo ukuyohola le mali.
Cishe bonke abantu abakhulu-me neLANGA bebekhala ngokuthi ukudla kuyabiza, bekumele ume-ngameli ayengeze le mali, okungenani ibe wu-R500.
UMnu Xolani Mthimkhulu (50) wakwa-C, KwaMashu, uthe waphe-lelwa wumsebenzi eminyakeni emine edlule. “Kangifuni ukuqa-mba amanga, yona le mali iwenzile umehluko futhi kube buhlungu kabi ngesikhathi isinqamuka, kodwa hhawu, ubengeke nje ume-ngameli wethu abe esethi thasi okungenani ibe wu-R500 ukuze sikwazi ukulekelela emindenini yethu nathi?” kusho yena.
Uthi le mali ulekelela ngayo ngokucoshacosha izishebo, kanti ukube beyinezeliwe futhi ubezophatha oshekhasi ababili nje naye athembeke.
Ukhala ngokuthi njengoba ngonyaka odlule bebehola, kungani manje sekumele baqale phansi ba-bhalisele le mali, kungasetshenzi-swa imininingwane emidala.
“Uhulumeni ubuye uzidlalele ngathi nje ngoba wona kufanele ngabe uthi ababengaholi ngonyaka odlule kumele babhalise.
“Lokhu kuzophinde kuthathe isi-khathi nje kanti silambile kuyima-nje, le mali siyayidinga,” kusho yena.
UNkz Thembisile Khuboni (34) waseNkandla – kodwa osaqube eThekwini ngoba ezobheka amatoho – uthe kubongwa okuncane, ku-bongwe okukhulu.
“Kuqale lezi zibhelu ngiseThe-kwini, ngizofuna amatoho. Ukubu-ya kwale mali kuzongisiza kakhulu ngoba ngizokwazi nokuthenga izi-nto zokugcoba njengomuntu wesifazane, ngingalokhu ngicela kuyise wezingane zami.
“Nginethemba futhi ukuthi noma kuthiwa masiqale phansi sibhalise kuzoshesha ngoba phela uhulumeni uyazi ukuthi silambile kuyimanje,” kusho yena.
Okhulumela uSassa, uNkz Sandy Godlwana uthe labo abebehola le mali ngaphambilini kumele bangakhathazeki, bazobe benga-qali phansi bebhalisa, kepha kuzobe kuwukuvuselela nje imininingwane ukuthi kuseyiyo yini.
“Uma ubukade uhola, sidinga ukuqinisekisa ukuthi namanje kawukakasebenzi yini, besesiqinisekisa nemininingwane esinayo ukuthi kuseyiyo yini,” kusho yena.
Uthe njengamanje uNgqongqo-she wezeNhlalakahle, uNkz Lindiwe Zulu, usaqoqa ulwazi ngomonakalo owenzekile ezindaweni ezahlukene bese bebheka ukuthi abantu bazokhokheleka kanjani.
“Okubalulekile wukuthi njengoba umengameli ethe imali izogcina ngoNdasa (March) wangonyaka ozayo, kuzoba njalo. Uma sezihla-nganile zonke izinhlaka ezithintekayo, kuzobe sekumenyezelwa-ke ukuthi kuqala nini ukubhalisa,” kusho uNkz Godlwana.
Uqhube wathi njengokusho kukamengameli, nabahlala nezingane abazigadayo abaziholela imali yesibonelelo sezingane, bazokwazi ukufaka isicelo sokuthola le mali.
Previous articlei-IFP ikhalise izihlobo zezisulu zase-Phoenix ngemali
Next articleKuyaqhubeka ukulalelwa kwelikaNgizwe